Nokia 7.1 ya disponible a la venta en los Estados Unidos | Androidsis
INokia 7.1 iyathengiswa eMelika ngokusemthethweni
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, INokia 7.1 ifike eSpain ngesitayile. Ngoku isixhobo sinyathela umhlaba waseMntla Melika ukunika ukhuphiswano oluqinileyo kwezinye iitermina zaphakathi kuluhlu.
Kwangokunjalo Ibonakaliswa ngokuba phantsi kwenkqubo ye-Android One, eyenza ukuba ibe sisamkeli esifanelekileyo sohlaziyo ngaphambi koninzi lwalo. Kwangelo xesha, ngenxa yezinye izinto kunye nokubalulwa, ngaphandle kwamathandabuzo, okwenza kube kukuthenga okugqwesileyo.
E-U.S, el Nokia 7.1 iyafumaneka nge $ 350 kwaye inikezelwa zii-opharetha ezininzi, ezinje nge-T-Mobile, i-AT & T, iCricket kunye neMetroPCS. Ayizukusebenza nge-Sprint kunye neVerizon. Abasebenzisi banokuyithenga ngexabiso elifanayo kubathengisi abakhulu baseMelika abanjengoAmazon, iVidiyo yeB & H, kunye nokuThenga ngokuBalaseleyo. INokia yenze ukuba ifumaneke ngombala oGlossy Midnight Blue kweli lizwe.
INokia 7.1 iyaqhayisa nge Iphaneli ye-IPS ye-IPS ye-5.8-intshi ekulungeleyo ngenotshi kunye nenqanaba lomlinganiso we-19: 9. Inikwe amandla yi-Snapdragon 636 kunye ne-4GB ye-RAM. Iyafumaneka nge-64GB yokugcina kwangaphakathi.
Kwisebe lekhamera, Isixhobo sisebenzisa i-12 kunye ne-5 megapixel shooter kabini ngasemva. Ikhamera ye-megapixel eyi-8 ngaphambili eya kwenza umsebenzi wayo kwiiselfie nangaphezulu. Kwangelo xesha, ithwala i-3.000 mAh ibhetri yesakhono kunye nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza ngezibuko lohlobo C lwe-USB.
I-HMD Global iyikhuphe nge-Android 8.1 Oreo ebhodini, nangona I-Android Pie iya kuphehlelela ukuphela kwenyanga ezayo yeselfowuni. Unokufumana uhlaziyo olukhawulezileyo njengoko lwakhiwe kwiqonga le-Android Oreo ke aluthwali nayiphi na ibloatware kwaye liza nomsebenzisi ococekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » INokia 7.1 iyathengiswa eMelika ngokusemthethweni
Uyisebenzisa kanjani iWebhu yeWhatsApp kuyo nayiphi na ikhompyuter
IBlackBerry KEY2 LE ifika eSpain